Kulungile masiye kwi isavenge sesithathu Olu dibaniso ubuso Yeyiphi ifilimu nomabonakude abeke eyethu amapolisa kunye nabacuphi boncwadi. Ayizukugqibela, kodwa eziseleyo ziya kuba zikhetheke ngakumbi. Kwakhona, kweli nqaku Akukho Mifanekiso ukuze wonke umntu azigcinele okwakhe.
Sinomabonakude we UMike Hammer, de I-Mickey Spillane, kwaye I-Spenser, de URobert B. Parker. Ezona zamva nje zifana nomcuphi onomdla Umlobi waseFryne, de UKerry Greenwood. Amakhaya Pepe Carvalho, zikatitshala Montalban, kwaye UArturo Andrade, de Ignatius weNtlambo. Kwaye ezi zibini zibandayo, yileya yaseRussia UArkady renko, ovela kuMntla Merika UMartin Cruz Smith, kunye naleyo yomhloli odumileyo waseDenmark UCarl Mørck, de UJussi Adler-Olsen.
1 UMike Hammer - uStacy Keach
2 Isixhobo - Robert Urich
3 UFryne Fisher-uEssie Davis
4 UPepe Carvalho njengo-Eusebio Poncela
5 UArturo Andrade - uJuan Diego Botto
6 Arkady Renko - UWilliam Buhlungu
7 UCarl Mørck -Nikolaj Lie Kaas
UMike Hammer - uStacy Keach
Akunakwenzeka ukulibala oko ifayili del IHarlem ebusuku ngu-Earle Hagen, umxholo wasentsomini kwintloko yoluhlu lweTV I-80's. Kananjalo asinakulibala ukuzikhukhumalisa kunye nesigqebhezana esachukumisayo kuye. UStacy Keach ngokusemandleni alo.
UMickey Spillane wadala iHammer encwadini Mna, ijaji, kwaye zenziwa kuqala Iimuvi ezimbini, ngo-1952 nango-1982. Kodwa kwakuse Uthotho lukamabonakude lwe-CBS, ikhutshwe ukusuka Ngo-1984 ukuya ku-1987, apho wayifumana yonke impumelelo. UHammer ngumphandi wabucala, ubiza umpu wakhe Betsy kwaye uhlala elandela unobhala wakhe, Velda. Umhlobo wakhe osenyongweni ngu UCaptain Pat Chambers, ISebe lamaPolisa lokuBulala ENew York. Enye yeencwadi zakhe, Ulwaphulo-mthetho olukhulu (Ngo-1967), yayilelinye lam lokuqala lokufunda abamnyama.
Isixhobo - Robert Urich
Siyaqhubeka kwi 80. Mhlawumbi abafundi abaninzi abazi ukuba lo mcuphi uyimveliso yokucinga URobert B. Parker. Umbhali wenoveli yolwaphulo-mthetho, owayengumbhali wokuqala kwaye kamva wasebenza kwiYunivesithi yaseBoston, wayidala Umbhalo wesandla kaThixo, eyokuqala 35 uthumele ngayo.
I-Spenser Yiyo Ex-boxer kunye ne ex-cop Ukusuka eBoston osebenza njengomcuphi wabucala. Ubomi nge intombi yakhe ususan, kunye nokusombulula iakhawunti yamatyala abo nomhlobo wakhe osenyongweni, Hawk, ohlala ngaphandle komthetho. Inkqubo ye- ABC bahlengahlengisa amabali abo kuthotho lweTV Spenser, umcuphi wabucala. Kwaye ubuso bakhe bamboleka URobert Urich, Omnye wabadlali abaziwayo bakamabonwakude baloo minyaka (kwaye wanyamalala kwakamsinya).
UFryne Fisher-uEssie Davis
Ipapashwe ngoku inoveli yesibini yalomlinganiswa wenziwe ngumbhali wase-Australia UKerry Greenwood. Impumelelo yakhe yayikukuba sele enayo amaxesha amathathu kwi Imdidlalo eqhubayo yeTV, iphi Umcuphi onobunkunkqele nonenkalipho ukusukela kumashumi amabini umdlali uyizisa ebomini U-Essie Davis. Ukusekwa, umculo kunye nokuzonwabisa ngamabali abo kungathandeki kwaye kuyonwabisa abathandi be uthotho lweediliya.
UPepe Carvalho njengo-Eusebio Poncela
Siza kwezi ndawo ukudibana enye yezona klasiki (ngemvume yomnye umntu) kunye nabacuphi besizwe abathandekayo. Uyilo olukhulu kunye nefuthe lenkosi UManuel Vazquez Montalban wabeka ubuso bakhe obudumileyo kuye U-Eusebio Poncela kuthotho lwe-TVE lowe-1986. Kodwa nabo baboleka ubuso babo UConstantino Romero y UJuanjo Puigcorbé, eyokugqibela kwinguqulelo yesiFrentshi.
UArturo Andrade - uJuan Diego Botto
En Cwaka kwikhephu (2011), umboniso bhanya-bhanya kaGerardo Herrero oguqula inoveli Ixesha labalawuli abangaqhelekanga, de Ignatius weNtlambo. Ngaba ifayile ye- Inoveli yesibini Kudlala umphathi UArturo Andrade, indoda yasemkhosini enexesha elimnyama elidlulileyo ukusuka kwixesha lasemva kwemfazwe laseSpain. Eli bali libekwe eSoviet Leningrad, embindini weNdebe yeHlabathi yeHlabathi. Ndiyintombi UJuan Diego Botto Njengombhalo Andrade, kwaye ngekhe wayitshintsha ngokuthe ngqo yomzimba onamandla ngakumbi nocacileyo kaCarmelo Gómez.
Arkady Renko - UWilliam Buhlungu
Kwaye sibuyela kwi isoviet Union kuba isuka apho UArkady renko, kanye I-Russian, melancholic kunye nomphenyi okhethekileyo eyadala uMntla Merika UMartin Cruz Smith. I isihloko sokuqala ye-8 eyenza (ukuza kuthi ga ngoku) uthotho, Ipaki yeGorky, yaba yimpumelelo kwaye yahlengahlengiswa kwifilimu kwi 1983. Ndiyacebisa bonke. Kwaye u-Arkady Renko akanabuso UWilliam Hurt, kodwa uHurt wayeyazi indlela yokumnika inxenye yengqele efunwa ngumxholo webali.
UCarl Mørck -Nikolaj Lie Kaas
Asishiyi ingqele ebandayo kwaye siphele kuyo EDenmark, kunye soloko eguquguquka kwaye enzima uMhloli uCarl Mørck. Isidalwa sombhali UJussi Adler-Olsen Ngumlinganiswa ophambili kuthotho oluphumeleleyo ISebe Q. Sele kunjalo izihloko ezithandathu ipapashiwe kwaye owesixhenxe kufuneka avele apha.
Kwaye bayahamba Iimuvi ezintathu olungelelanisa iinoveli ezintathu zokuqala kakuhle: Umfazi oye wakrwela iindonga, Amakhwenkwe awela emgibeni y Umyalezo kwiBhotile. Zonke iinkwenkwezi zomdlali weDenmark UNikolaj Lie Kass, ukuhombisa iMørck enzima. Kubalulekile kubathandi benoveli yolwaphulo-mthetho yaseNordic.
I-TuuuLibrería: ngumnikelo, zininzi kangangoko unako iincwadi zakho
Iintlelo ezisi-8 zesikhumbuzo seRAE